hargaysa iyo munaasabada xuska 10 jirsaday ee 29ka hidaar. - Cakaara News
hargaysa iyo munaasabada xuska 10 jirsaday ee 29ka hidaar.
Hargaysa(CN) Arcaba, 9, December, 2015 Waxa Maanta si Baladhan logu xusay Magalada Hargaysa Xuska 10aad ee Maalinta Qomiyadaha iyo Shucubta itoobiya hidhar 29/2008, munadabadan oo ay ka soo qaybgalen jahaliyada DDSI ee Somaliland iyo.Waftigi u hogaminayay Wazirka Ganacasiga DDSI Mudane Khadar Cabdi Isnacil iyo Qunsulka guud ee Itoobiya u fadhiya somaliland General Barahe, Dhinaca Somaliland.
Munaasabadan oo si qurux badan loo soo agaasimay ayaa waxaa kale oo ka soo qaybgalay masuuliyiinta sare ee Somaliland oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaarada ahniga qaranka Somaliland mudane maxamed muuse diiriye Gudomiyaha Xisbiga Kulmiye Mudane Muse Bixi Cabdi masuuliyiin iyo marti sharaf kale.
Waxaana munaasabadaasi ka hadlay wasiirka gaadiidka iyo ganacsiga DDSI mudane khadar cabdi ismaaciil oo ugu horayntii sheegay in ay maanta sharaf wayn u tahay isaga iyo waftiga uu hogaaminayo in ay jahliyada soomaliland kala soo qayb-galaan munaasabadan 10aad ee xuska 29ka hidaar.
Wuxuuna ka warbixiyay in ahmiyadan munaasabadan oo uu sheegay in ay tahay maalin farxadwayn u leh dhamaanba qoomiyadaha iyo shucuubta dalka itoobiya taasi oo muujinaysa sinaanshaha qoomiyadaha iyo shucuubta itoobiya, isjacaylka nabad kuwada noolaaanshaha, isqadarinta ka wada faa’iidaysiga iyo wax wada qabsiga dhinaca horumarka.
Wasiirku isaga oo ka hadlaya ahmiyada ay leedahay xuskani waxa uu yidhi”haddii aan dib u eegno taariikhda xuska munaasabadan maanta waxaa xusid mudan in isbadalkii taariikheed ee ka dhacay dalka itoobiya ee sida geesinimada leh xukunka lagaga tuuray kalidii taliyihii dhiig miiratada ahaa ee mingisti isbadalkaasi oo uu hormuud ka ahaa ururka EPRDF ayaa dhidibada loo taagay axdi qarameed loo wada dhan yahay kaasi oo sugay sinaanta nabad kuwada noolaanshaha aqoonsiga qoomiyadaha iyo u sinaanshaha sharciga xaqa kobcinta dhaqaalaha”
Waxaa kale oo ka hadlay munaasabadan qusulka guud ee itoobiya u fadhiya Somaliland mudane general burahe tasfaye oo ka warbixiyay ahmiyada ay leedahay munaasabadani sharax dheerna ka bixiyay soonyaalkii taariikheed ee uu guud ahanba dalka itoobiya soo maray iyo heerka uu maanta taagan yahay.
Gudoomiye xisbiga kulmiye ahna munaraxa madaxwayanaha mudane muuse biixi oo ka hadlay xafladaasi aya sheegay in ay siwayn ugu faraxsan yihiin munaasabadan xuska ee qoomiyadaha itoobiya iyo horumarka buuxa ee ay gaadheen itoobiyada cusubi.